Emfutshane imvelaphi ye-isithai ilifa umthetho - Abaqondisi-mthetho ka-Norway! Isithai abaqondisi-mthetho, a isemthethweni portal.
Emfutshane imvelaphi ye-isithai ilifa umthetho
Ukuba lo mntu waba watshata, lo mntu u-share (idla ileta) zoluntu kwipropati kunye nayo nayiphi na ezahlukeneyo ipropati ka-lo mntu uza eyiyo i ilifa ukuba abe zihanjiswe
Ukuba lo mntu kokuba abantwana, grandchildren okanye omkhulu grandchildren, lowo utshate naye uza kufumana wesine (njengoko eli xesha, ubuncinane NOK) le ilifa.
(Kukho kancinci ngaphezulu kwi ubuncinane ilifa kwicandelo.) Ukuba closest relatives ka mntu ubhubhileyo baba abazali, abantwana bakokwenu okanye inzala yabo, lowo utshate naye baya kuwudla ilifa isiqingatha (okanye, njengoko eli xesha, ubuncinane NOK, bona icandelo ku testamentary ilifa). Uninzi rhoqo, lowo utshate naye uya kuzigcina i-undivided ubomi yimo kwi-marital ipropati, nto leyo iza ngokuqhelekileyo hayi kuba zihanjiswe de lomtshato eliseleyo uyafa.
Oku kuthetha kanjalo ukuba lomtshato eliseleyo akusebenzi ilifa ukusuka lo mntu lowo utshate naye.
Ukuba lo mntu waba nayiphi na abantwana ukusuka komnye budlelwane, ezifana abantwana anokukhetha musa ukuvumela lomtshato eliseleyo ukuba khumbula ukuba indawana mntu ubhubhileyo ke ilifa bamele ukuba ilifa. Ezinjalo abantwana babe, njalo, ibango zabo share le ilifa eziza kuhlawulwa ukususela ilifa.
Ukuba lo mntu kokuba abantwana, baya idla ilifa yonke into mntu ubhubhileyo amagqabi ngasemva, emva mlingane ka mntu ubhubhileyo, ukuba ikhona, sifumene yakhe okanye yakhe unikezelo.
uza kufumana ilifa lobomi, ukuba abantwana mntu ubhubhileyo befile okanye renounce labo. Ezinjalo grandchildren okanye omkhulu grandchildren siya kufumana ukuba indawana ilifa ukuba nabazali babo ingaba bayamkela. Ukuba lo mntu waba watshata kwaye childless, baya kuwudla ilifa intsalela lo mntu u-estate, emva mlingane ka mntu ubhubhileyo sifumene yakhe okanye yakhe unikezelo ngesiqhelo, nesiqingatha mntu ubhubhileyo ke share zoluntu ipropati nesiqingatha na ezahlukeneyo ipropati le mntu ubhubhileyo. Ukuba lo mntu waba unmarried kwaye childless, baya kuwudla ilifa yonke into Ukuba lo mntu sele umntwana, grandchild okanye omkhulu grandchild, umama, utata, umntwana wakokwenu okanye isizukulwana ezinjalo ziya kufumana ilifa lobomi nto.
ilifa kuphela ukuba lo mntu waba unmarried, childless kwaye kokuba akukho ezinye vala relatives ka-uhlobo kukhankanywe ngasentla.
Kulo mzekelo, ngamnye set of oomawomkhulu okanye kumgca we oomawomkhulu uza kufumana nesiqingatha ilifa elo. Ukuba lo mntu kokuba akukho ziindlalifa zobukumkani ezinikezwe ngasentla kwaye akukho a ukubhalwa kuza, Urhulumente uza kufumana ilifa lobomi yonke into. Njengokuba iqala incopho, testator unakho ukulahla yonke into lowo okanye yena ufuna ngu-uza kunye ebalulekileyo okukodwa ukuba testator akavumelekanga ukuba disinherit yakhe okanye wakhe lowo utshate naye okanye abantwana. Abantwana babe ibango ubuncinane ilifa amabini anesithathu into abazali sishiya kodwa zingade a ubukhulu ka-NOK enye yezigidi nganye umntwana ngamnye umzali. Umhlolokazi - widower babe ibango ubuncinane ilifa kwi-i-mali ehambelana yesine uphinda-phinda ebizwa-base umyinge (G) ezibonelelwe ngu - isithai kazwelonke ye-inshorensi ukuba ulingane sele inzala. Oku, ke ngoko, izixa-mali kwi-NOK Ukuba ulingane ayina inzala, ubuncinane ilifa ngu G oko kukuthi, malunga nama-NOK. Ukuba lo mntu lowo utshate naye amagqabi ngasemva ngaphantsi ubuncinane ilifa, umhlolokazi - widower uya ilifa yonke into. Ukuba amaqabane kokuba kuluntu, ipropati, umhlolokazi - widower iya kuba ngokuqhelekileyo anelungelo lokuba kuzigcina i-undivided ubomi yimo kwi-propati. Enjalo ilungelo ngu limited, ukuba testator kokuba abantwana ukusuka komnye budlelwane.
Ukuba lo mntu amagqabi ngasemva kushishino ukuba isebenza ngaphandle Norway okanye real kwipropati ngaphandle Norway, ilifa irhafu kukuba kuhlawulwa kweli lizwe apho ushishino okanye ipropati ukhoyo.
Norway uye wangena izivumelwano kunye nezinye Scandinavian amazwe kunye Senegal ne-United States ukuze uphephe kabini taxation selifa. Norway alifumanisanga bangena izivumelwano kunye namanye amazwe Umxholo ezi-web amaphepha ayi intended njengoko isemthethweni ingcebiso kodwa purely njengoko ulwazi. Ukuba ufuna ingcebiso okanye uncedo ngokumayela othile mba, nibe qhagamshelana nathi okanye omnye umthetho ifemi kuba uncedo.
State of Utah - Ofisi Imali Iinkonzo
Orinasa Fanafoanana tao Norvezy